Tirada Wariyaasha Caalamka lagu dilay sanadkan sii dhamaanaya oo la shaaciyay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Tirada Wariyaasha Caalamka lagu dilay sanadkan sii dhamaanaya oo la shaaciyay
Ururka u dhaqdhaqaaqa difaaca Saxafiyiinta Caalamka ee CPJ ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay kaga hadashay tirada wariyaasha daafadaha dunida lagu dilay sanadkan sii dhamaanaya ee 2015-ka.
CPJ ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Daafaha caalamka sanadkan lagu dilay wariyaal gaaraya 69-saxafi, halka xabsiga la dhigay Wariyaal gaaraya 199-Wariye oo lagu xiray wadamo kala gadisan oo caalamka kuyaala.
Dalka Siiriya ayaa safka hore kaga jiray dalalka ugu badan ee Wariyaasha lagu dilay sanadkan, waxaana Warbixinta CPJ lagu sheegay in dalka Siiriya lagu dilay 13-Wariye .
Wadamada kale ee caalamka kuyaala laguna dilay Wariyaasha ugu badan waxaa safka hore kaga jira wadamada Faransiiska, Brazil, Yemen, Koonfurta Sudan iyo Ciraaq, wadamadan ayaana lagu dilay tiro badan oo saxafiyiin ah sanadkan sii dhamaanaya.
Dalka Soomaaliya ayaa kaalinta sagaalaad kaga jira dalalka ugu badan ee Wariyaasha lagu dilay sanadkan, waxaana Warbixinta Hay’ada lagu sheegay in sanadkan Soomaaliya lagu dilay 3-Wariye, waxaana Wariyihii ugu dambeeyay ee sanadkan Soomaaliya lagu dilay ay noqotay Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo ka shaqeeneysay Warbaahinta Dowlada Soomaaliya.